laacib » Haddii Man City Laga Mamnuuco Champions League Miyay Arsenal Ama Man United Buuxin Doonaan Booskooda?
Haddii Man City Laga Mamnuuco Champions League Miyay Arsenal Ama Man United Buuxin Doonaan Booskooda?
Manchester City ayaa laga yaabaa in laga mamnuuco ka qeyb galkooda Champions League haddii lagu helo danbiga ah inay ku xadgudbeen sharciga dhaqaale wanaaga kooxaha Yurub.
Kooxda hanatay horyaalka Premier League ayaa waxaa baaritaan ku wada gudiga koontaroola dhaqaalaha kooxaha Yurub ee UEFA ka dib markii la helay dukumiintiyadooda dhaqaale.
Gudigaan ayaa soo gudbin doonaa warbixinta baaritaankooda, waxaana ay soo jeedin doonaan in Manchester City muddo sannad ah laga mamnuuco tartanka Champions League.
Waxaa la sugayaa in la arko sida adag ee ay UEFA u ciqaabi doonto Man City, laakiin haddii laga mamnuuco ka qeybgalkooda Champions League waxa ay albaabka u fureysaa koox kale oo Premier League.
Sida ay haatan wax yihiin Man City, Liverpool, Tottenham iyo Chelsea ayaa u soo baxay wareega group-yada Champions League ee xilli ciyaareedka danbe.
Arsenal iyo Manchester United ayaa ku hungoobay inay u soo baxaan inkastoo Gunners ay u soo bixi karto haddii ay qaado Europa League.
Kooxda Unai Emery ayaa ku dhameysatay kaalinta shanaad xilli ciyaareedka Premier League, waxaana ay finalka Europa League la ciyaari doonaan Chelsea iyagoo og in guul ay gaaraan ay u soo saareyso Champions League.
Haddii Arsenal qaadi weyso Europa League, markaas iyaga ayaa buuxin doonaa booska Manchester City ee xilli ciyaareedka danbe madaama ay kaalinta shanaad ku dhamesyteen.
Laakiin haddii Gunners ay badiso kulanka Baku islamarkaana City laga mamnuuco Champions League markaas waxaa booska City la wareegi doonta Manchester United oo horyaalka kaalinta lixaad ku dhameysatay.